Social Media – SoShwe
May 13, 2022	Other 0
အခုနောက်ပိုင်း လူတော်တော်များများဟာ Social Media စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပြီိး လူတွေရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရရှိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ထူးထူးဆန်းဆန်းကိစ္စရပ်တွေကို ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာလည်း မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ အရှိန်ဖြင့်မောင်းနှင်လာတဲ့ Lamborghini ကို ခုန်ကျော်ပြီးစတန့်ပြရန် ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ နယူးယောက်မြို့မှ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် Armand လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူထံမှ Lamborghini တစ်စီးကို လက်ဆောင်အဖြစ် ရက်အချို့မောင်းနှင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး Lamborghini တစ်စီးကို ရက်အချို့ စီးနင်းခွင့်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားမိသလဲ ? ? ? ကျွန်တော်သာဆိုရင် ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး ပြိုင်ကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့ Lamborghini ကြီးကို မောင်းနှင်ပြီး …
Social Media သာ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာများ။
ဟိုးအရင် Social Media တွေ မပေါ်ပေါက်လာခင်အချိန်ကာလကို ပြန်သွားကြရအောင်။ အဲ့အချိန်တုန်းကတော့ အခုလိုမျိုး လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်တွေဖြစ်တဲ့ Viber ၊ Facebook ၊ Line ၊ Twitter တို့လို Application တွေ ပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ထင်ခဲ့ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာ Social Media ဟာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့ Social Media ကြီးသာ ရုတ်တရက် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက််ပါတယ်။ ၁။ ပိုမိုပျော်ရွှင်နိုင်ချေရှိခြင်း။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းက Copenhagen’s Happiness Research Institue မှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ …
ပရိသတ်များကို အ့ံအားသင့်ဖွယ် လိမ်လည်ခဲ့သည့် YouTuber တစ်ဦး။
November 25, 2021	LifeStyle 0
YouTuber တစ်ဦးဖြစ်သူ Natalia Taylor သည် သူမရဲ့အင်စတာဂရမ်၌ နိုင်ငံပေါင်းစုံသို့ရောက်ရှိနေသည်ဟု ဓာတ်ပုံပေါင်းများစွာတင်ထားပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့၌မူ သွားရောက်ခြင်းမရှိဘဲ Indoor ၌သာ အမြင်များကိုလှည့်စားပြီး ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံများဖြစ်ကြောင်း သူမကိုယ်တိုင် ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ အင်စတာဂရမ်၌ “ဘုရင်မတစ်ပါး ရောက်ရှိလာပါပြီ။” ဟုဆိုကာ Location ၌ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဘာလီကမ်းခြေကို ဖော်ပြထားသည့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို တင်ထားခဲ့ပေမယ့် သူမကိုယ်တိုင် YouTube ပေါ်သို့ တင်ခဲ့သည့် ဗီဒီယို၌မူ အဆိုပါဓာတ်ပုံများသည် Ikea ၌ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံများဖြစ်နေကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ Taylor နဲ့ သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာမဖြစ်သူ Ally Amodeo တို့ဟာ အဆိုပါဓာတ်ပုံများကို Ikea အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်၌ မတူညီသည့်ပုံစံအမျိုးအစားဖြင့် …